स्वास्थ्य सन्देश Archives - ramechhapkhabar.com
गर्मीमा बालबालिकालाई किन आउँछन् घमौरा र कसरी जोगिने?
२९ वैशाख, काठमाडौं । बढ्दै गरेको तापक्रमले तराईं लगायत काठमाडौं उपत्यकामा समेत बालबालिकामा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बिन्ध समस्या आउने गरेका छन्। कान्ति बाल अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँ हरेक दिन कयौं बिरामीहरु घमौरा, घाउ, खटिरा र कीराको टोकाइबाट आउने एलर्जीको समस्या लिएर आउने...
बिहान ब्रश गर्नु अगाडि पानी पिउनु कत्तिको लाभदायक ? जानिराखौं
२९ वैशाख, काठमाडौं । हाम्रो शरीरलाई रोग लाग्नबाट बचाउन र हाइड्रेट राख्नका लागि पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु आवश्यक छ । विशेषज्ञका अनुसार गर्मीयाममा हरेक दिन १० देखि १२ गिलास र जाडोयामा ६ देखि ८ गिलास पानी पिउनु आवश्यक छ । तर, आवश्यकभन्दा बढी पानी...
जति गरेपनि किन घट्दैन पेट, अपनाउनुहाेस् यी जादुमय तरिका
काठमाडौं । पेटमा बोसो थपिएर धेरै मानिस हैरान भएका हुन्छन् । बोसो घटनाउनका लागि कतिपयले जिमको सहारा लिन्छन, कतिपय दौडिन्छन्, कतिपयले अन्य कसरत र योगदा गर्दछन् । तर सबैमा त्यही अनुपातमा पेट भने घटदैन । कारण के त ? कतिपयले यसको कारण खानपीन भएको...
अनुहारमा किन आउँछन यस्ता काला दागहरू ? यो विधि प्रयोग गरी सजिलै हटाउनुस्
२६ वैशाख, काठमाडौं । अनुहारमा काला दागहरू आएर हैरान हुनुहुन्छ ? वा अनावश्यक चिल्लोपना भएर तनावमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने यहाँ ५ तरिकाको प्रयोगबारे चर्चा गरिएको छ । जसको प्रयोग गरी सहजै त्यस्ता दागहरू हटाउन सकिनेछ । यी ५ विधि, जसको प्रयोगले सहजै...
कस्तो भाँडोमा पानी पिउनु हुन्छ ? प्लास्टिकको बोतलबाट पानी पिउनु खतरनाक…
२२ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं-गर्भवती भएको बेलामा महिलाहरूलाई धेरै पानी पिउन मन लाग्छ । शरीरमा पानीको स्तर कायम राख्न गर्भवती महिलाले धेरै पानी पिउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले घरबाट बाहिर निस्केको बेलामा उनीहरू बोतलमा पानी भरेर लैजान्छन् । तर प्लास्टिकको बोतलबाट पानी पिउनु हानिकारक हुन्छ...
दुध तातो पिउने कि चिसो ?
११ वैशाख, काठमाडौं । हाम्रो घरमा बुबाआमाले हामीलाई सानोमा पक्कै पनि हरेक साँझ वा बिहान भन्नुहुन्थ्यो– दुध पिएर बल्ल अरु काम गर्नु । दुध पिउनु कतिका लागि निकै रमाइलो लाग्थ्यो होला त कतिका लागि झन्झटिलो । तर, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, दुधमा...
किन बिग्रन्छ बालबालिकाको दाँत, कसरी जोगाउने?
११ वैशाख, काठमाडौं । दन्त चिकित्सक थापा बालबालिकाको दाँत बिग्रिनुको मुख्य कारण जंक फुड र गुलिया खानेकुरा भएको बताउँछिन्। ‘हिजोआज जंक फुड र गुलिया खानेकुरा बालबालिकालाई अधिक मात्रामा खुवाइन्छ, दाँत बिग्रनुको मुख्य कारण यही हो,’ उनले भनिन्। थापाका अनुसार जंक फुड या गुलिया चकलेट...
के तपाइको नङ् टोक्ने बानी छ ? छ भने आजै छाड्नुहोस्, निम्त्याउन सक्छ यस्ता खतरनाक…
काठमाडौं । संसारमा लगभग ६० करोड मानिस नङ टोक्ने गर्छन् । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार, मानिसहरू चिन्तित वा बोर हुँदा अनायासै नङलाई दाँतमुनि पार्छन् । यो एक प्रवृत्ति मात्र हो । नङ चपाउनु गलत भएको भनी बच्चाहरूलाई बताउँदा पनि केहीले छोड्दैनन् र पछि ठूलो हुँदासम्म चपाउने...
के तपाइको खुट्टा बाँउडिने, फर्कने गर्छ? जान्नुहोस् ३ समाधान
८ वैशाख, काठमाडौं । धेरैजसो महिलाहरुमा देखिने खुट्टा फर्कने समस्या गर्भावस्था वा महिनावारीको समयमा सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ । सबैभन्दा पहिलो के कारण खुट्टा फर्कने वा दुख्ने हुन्छ पत्ता लगाउन आवश्यक हुन्छ । यदि गर्भावस्थाका कारण हो भने त्यसैअनुसारको उपाय अनाउनु पर्ने हुन्छ ।...
यस्ता हुन्छन् मृगौला फेल हुन लागेको प्रारम्भिक संकेत, सबैले जानीराखौं
काठमाडौँ । हाम्रो शरीरमा किड्नी अर्थात मृगौलाले रगत सफा गर्ने काम मात्र गर्दैन, पानीको सहीस्तर कायम राख्ने र हर्मोन स्रावित गर्ने काममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यसैले मानव शरीरका लागि किड्नीको महत्वपूर्ण स्थान छ । त्यसैले यसलाई स्वस्थ राख्नु जरुरी छ ।...
123 … 10 पछिल्ला »